Baarlamaanka Itoobiya ayaa marag ka noqonaya Madaxweyneyaal is weydaaranaya. – XOGMAAL.COM
Mulatu Teshome lama shaacin sababta rasmiga ah ee ka dambeysa iscasilaadiisa, wuxuuna xafiiska maamulayay muddo afar sano ah, Teshome ayaa xilka kala wareegay Girma Wolde Gorgis oo hayey xafiiska muddo 12 sano ah gaar ahaan intii u dhaxaysay Siteembar 2001 – Oktoobar 2013 tirsiga dalkaasi.
Mulatu Teshome Madaxweynaha Itoobiya ayaa la filayaa inuu baarlamaanka waddankiisa u gudbiyo is casilaaddiisa sida uu xafiiska xiriirka baarlamaanka federaalka Itoobiya warbaahinta u xaqiijiyey.
Baarlamaanka Itoobiya ayaana laga dhowrayaa in maantaba uu doorto Madaxweyne cusub oo noqonaya kii shanaad ee uu dalkaasi yeesho tan iyo wixii ka dambeeyey horraantii 1991 markii la eryey Mengistu Haile Mariam.
Akhriso: Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada oo War-murtiyeed soo saaray